TRANOM-PIANTOHANA MAMA : Miisa 1 831 ireo trangana loza nandoavana vola ho an’ny taona 2019
Nitondra ny tomban’ezaky ny asa vitany nandritra iny taona 2019 iny ny teo anivon’ny Tranom-piantohana Mama na “Mutuelle Assurance Malagasy”. Fantatra tamin’izany fa nisy efa ho 1 831 ireo tragana loza nandoavana vola izay mitentina hatrany amin’ny enina Miliara Ariary. 14 janvier 2020
Taonan’ny asa ary anisany taona nahitana fahombiazana tanteraka iny taona 2019 ho an’ny tranom-piantohana Mama. Manoloana izany dia nahazo fankasitrahana manokana avy amin’ny vondrona manara-maso ny fomba fiasan’ny tranom-piantohana eto Madagasikara izy ireo. Tafiditra ao anatin’ireo tranom-piantohana mendrika indrindra tamin’ny fandoavana ny voka antoka tamin’ireo mpikambana aminy izay niharan-doza ny Mama.
Araka ny fanadihadiana natao dia nahatratra 1 831 ny isan’ireo tranga nandoavana vola teo anivon’ity tranom-piantohana ity tamin’iny taona 2019 lasa teo iny. Io antontan’isa io dia mitsinjara araka ny karazana fahavoazana naharasain’ny Mama taratasy fangatahana, ka nokirakirain’izy ireo izay nitotaly hatramin’ny 5827. Fantatra fa ny 1 101 tamin’ireo dia mahakasika ny fahasimbana teo amin’ny lafiny ara-pitaovana izay nandoavana vola fiantohana. Ho an’ny antontan-taratasy mahakasika ny loza nihatra tamina olombelona kosa dia 612 ireo efa nandoavana vola fiantohana. Tranga miisa 27 no nandoavana vola ho an’ny fiantohana hafa ary antontan-taratasy miisa 91 no nandoavana vola tamin ny tranom-piantohana hafa, dia ny Havana sy ny Aro izany.
Mitentina enina Miliara Ariary ny vola naloa
Voaloa ara-dalàna avokoa ny volan’ireo mpikambana nahafeno ny dosie ilaina tamin’ireo trangana loza rehetra ireo. Nahatratra enina miliara Ariary latsaka na 586 393 679 ny vola naloa tamin’izany. Araka ny lalàna mifehy ny andraikitr’ireo trano fiantohana dia manana telo volana aorian’ny naharaisany ny antontan-taratasy fangatahaka avy amin’ireo tra-doza ny Mama mba ahafahany manao ilay fanonerana. Hatreto tsy nisy olana fa voahajan’izy ireo tsara io fe-potoana io. Fanamby apetrak’ireo tompon’andraikitra ihany koa ny hampanara-dalàna hatrany ny asan’izy ireo. Nampiseho ny maha-matihanina azy tanteraka ny tranom-piantohana Mama tamin’ireo antontan-taratasy tonga teo am-pelatanan’izy ireo. Isany mbola sakana amin’ny fanatanterahan’izy ireo ny asany kosa anefa ny tsy hahafahan’ny tranom-piantohana miroso avy hatrany amin ny fandinihana ny dosie tonga eo am-pelatanany.
Matetika dia ny iray amin’ireo nanao loza izay mihevitra ho manana ny fahamarinana ihany no nanao ny fanambarana sy nanatitra ny antontan-taratasy. Ny teo anivon’ny trano fiantohana anefa dia nanazava fa tena ilaina ny taratasy mirakitra fanazavana avy amin ny olona faharoa izay tafiditra tao anatin ny loza niseho. Raha tamin’iny taona nivalona iny, nanomboka teo amin’ny datin’ny iray janoary 2019 ka hatramin ny 31 desambra 2019 dia nahatrata 9, 98 isan-jato ny dosie efa voaloa vola. Ho an’ ireo taona tany aloha kosa dia efa tafakatra 90, 02 isan-jato ny dosie nandoavana vola.